Marigold बारहमासी रोपण र हेरविचार, खेती
फूल कुनै पनि घर र बगैचा सजाउनु। तिनीहरूले हामीलाई वरिपरि उत्सव वातावरण सिर्जना, वसन्त मुड र सुखद सुगन्ध दिन्छ। विशेष समय र भौतिक लागत आवश्यक गर्दैन कुनै अपवाद र marigold बारहमासी रोपण र हेरविचार छन्। रंग को नाम आफ्नो मखमल ज्वारभाटा देखि भयो। केही देशहरूमा तिनीहरूले Marigolds भनिन्छ।
फाइदा र marigold को बुरा
अन्य कुनै पनि बोट जस्तै, यो फूल यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष छ। होईन सबै किनभने peculiar गन्ध तिनलाई प्रेम भन्ने तथ्यलाई सुरु गरौँ। सुगंध धेरै tartness सुझावको साथ उच्चारण छ, त्यसैले केही मानिसहरू निस्सन्देह, यो राम्रो छ, गुलाब वा त्यो गंध carnations रुचाउँछु। तर यो अनौठो गन्ध बिरुवाहरु र रोग को कारण बिगार्न कि विभिन्न किरा repels। निस्सन्देह, यो marigolds द्वारा नजिकै लाभ को छ। खेती, तिनीहरूलाई लागि रोपण र मायालु किनभने यो फूल को एक परिणाम अल्छी माली लागि एक godsend हुन्, एक सानो समय लाग्छ र स्रोतसाधन धेरै आवश्यक छैन।
साथै, Marigolds छैन खडेरी डराउँछन्, र यो पनि माली मूल्यांकन गर्छन्। यी फूल रोपण गरेर, तपाईं बारम्बार हजारी चिन्ता गर्न सक्दैन। को गर्मी मा सम्पूर्ण परिवार त्यहाँ केही हप्ता को बोट मर्नेछन् भनेर चिन्ता बिना, समुद्र मा दिन को लागि एक संभावना छ। घर फर्केपछि पछि, तपाईं बारहमासी, कि को रोपण र हेरविचार blooming तपाईं केवल एक खुशी, एक सार्वभौमिक समस्या हुनेछ लागि उज्ज्वल marigolds रूपमा सबै पाउनुहुनेछ।
कसरी लगाए गर्न
के तपाईं ठीक यो बोट प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भनेर निर्णय गर्दा, त्यसपछि बीउ लागि दोकान को हतार। तिनीहरूले भिजेको र अधिक-सुकेको छैन, कुनै पनि क्षति बिना, सबै एउटै आकार थिए भनेर तिनीहरूलाई चयन गर्नुहोस्। तिनीहरूले अङ्कुराउन गर्दा, त्यसपछि विन्डो बाहिर खुला फूल ओछ्यानमा सट्टा हामी एक पुरा फूल ग्रह हुनेछ। Marigolds, रोपण र हेरविचार एक वास्तविक खुशी हुने, कुनै पनि घरमा आनन्द को वातावरण ल्याउन र सुख गर्न सक्षम हुनेछ।
बीउ साना प्वालहरू रोपिन्छ, तिनीहरूलाई बीच दूरी2सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। आफ्नो जमीन माथि छर्कियो र त्यसपछि पानी हाले (तह एक सेन्टिमिटरले भन्दा अधिक छ)। खैर, पानी धेरै हुनु हुँदैन। तपाईं पहिलो स्प्राउट्स सम्म मध्यम हजारी सामना गर्न आवश्यक छ।
अग्रगामी पात को सजिलै देखिने उपस्थिति, फूल नयाँ स्थानमा transplanted गर्दा। खुला जमीन - यदि यो बर्तन थिए, यो अब छ। यो Marigolds प्रत्येक अन्य धेरै नजिक हुनु हुँदैन। तिनीहरूलाई सुन्दर चिटिक्क पङ्क्ति वा ज्यामितीय तथ्याङ्कले राम्रो लगाए। विस्तृत वर्णन जो विशेष संस्करणहरू, मा हुन सक्छ नमुना आफ्नो संस्करण चयन marigold बीउ, को खेती रोपण, प्रजातिहरू र marigold को गुण।
replanting लागि बीउ कसरी प्राप्त गर्न
निस्सन्देह, तपाईंले एक पटक आफ्नो प्रयासको फल हेर्न गर्दा - विन्डो बाहिर फूल को एक सम्पूर्ण क्षेत्र, तपाईं बोट marigolds अर्को वर्षको लागि चाहनुहुन्छ छौँ। रोपण र हेरविचार, प्रजाति र बिरुवाहरु को किसिमहरु प्रारम्भिक वसन्त पहिले नै पूर्ण तपाईं झटका एक वास्तविक आवेग हुनेछ। यो अवधि बेला बोट न्यानो कोठा मा लगाए गर्न सकिन्छ। अप्रिल-मे को आगमन संग, तिनीहरूले खुला जमीन मा transplanted गर्न सकिँदैन, वा तपाईं तुरुन्तै गर्न सक्नुहुन्छ, तर समय अघि, घट्दैछ सम्म र चिसो चिसो।
तपाईं marigolds र निम्न वर्ष रोपेर गर्न चाहनुहुन्छ भने तिनीहरूले पूर्ण ड्राई अघि केही फूल, त्यसपछि ओछ्यानमा मा छोड्नुहोस्। त्यसपछि, देखि कप ध्यान हुनुपर्छ, बीउ हटाउन तिनीहरूलाई भोकमरी र एक सानो अर्को वसन्त सम्म बन्द राखे। बस यो विधि सधैं Marigolds गत वर्ष समान हुनेछ प्राप्त छैन भनेर सजग हुन। सबैभन्दा लोकप्रिय किसिमहरु सामान्यतया संकर छन् तिनीहरूले, आकार र रंग भिन्न हुन सक्छन्। आफ्नो वंशानुगत विशेषताहरु कहिलेकाहीं बिरुवाहरु को केही पुस्तामा भित्र आउँदैन। व्यवसायी वृद्ध नमूनों तेजी र ब्लूम गोली आफ्नो क्षमता गुमाउन किनभने सामान्यतया दुई वर्ष पहिले अधिकतम को बीउ रोपेर गर्न, सल्लाह छन्।
marigolds जस्तै भुइँमा के हो
हामी सिकेका रूपमा यी फूल दुई तरिकामा हुर्किसकेका गर्न सकिन्छ: स्प्राउट्स को रूप मा र सही खुला जमीन मा। हरेक माली उहाँलाई थप उपयुक्त छ कि पहुँच विधि छनोट। कुनै पनि मामला मा नै समय मा भूमि, रूपमा छाडा हुनुपर्छ। राम्रो जब तपाईं धरण, पीट, टर्फ र बालुवा को अनुपात राख्नुहोस्। अन्य घटक रूपमा आधा धेरै लिन आवश्यक अन्तिम भाग। फूल पनि राम्रो जल आवश्यक छ। यो सजिलै हासिल, रोडा, बालुवा र विस्तार माटो को एक मिश्रण संग छर्कियो तीन सेन्टिमिटर माटो छ। बस जमीन मा लैंडिंग अघि, तपाईं मल ताजा मल बनाउन, तर गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं खुला जमीन मा marigolds लगाए भने, तिनीहरूले एक हप्ता भित्र अङ्कुराउन, र 2-3 महिना ब्लूम हुनेछ। यो विधि बीउ फेंकता संग विशेष जो को गहिराई grooves संग तयार - आधा दुई सेन्टिमिटर गर्न। बिरुवा को चुनिएको विधि भने, बीउ बक्से मा लगाए गर्न आवश्यक छ। पहिलो मार बारेमा 10 दिन पछि देखा पर्छ।
क्षेत्र मा पहिलो पात त्यहाँ हुँदा, आनन्द कुनै सीमा छ। तर अब तपाईं एक नयाँ चासो छ - छ , marigolds बढ्दै हेरविचार र बिरुवाहरु transplanting। पहिले नै उल्लेख रूपमा, तिनीहरूले unpretentious छन्, तर अझै पनि अत्यधिक चिस्यान र छाया (यो जवान मार मा धेरै राम्रो प्रभाव छैन) जोगिन। एक आदर्श वृद्धि तापमान रंग नजिकै + 23-25 डिग्री छ। चिसो हावा बोट पारदर्शी फिलिम संग विशेष विभाजन सुरक्षित हुनुपर्छ। खाद Marigold महिनामा एक पटक गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले मात्र तेजी भयो कि, तर पनि, पर्याप्त छ प्रशस्त ब्लूम। छैन धेरै, अन्यथा स्थिर चिस्यान स्प्राउट्स को rotting हुन सक्छ छ बिरुवाहरु जल।
रुचाउने यस्तो अनुसूचीमा गर्दै:
मार 10 सेन्टिमिटर को एक उचाइ पुग्नुभएको छ।
पहिलो तन्तु देखिन्छन्।
फूल को शुरुवात।
साथै, फूल समय समयमा माटो मा उचित हावा परिसंचरण सुनिश्चित गर्न पान गर्न आवश्यक छ। तपाईं ब्रश को एक सुन्दर आकार छ गर्न चाहनुहुन्छ भने, कहिलेकाहीं तिनीहरूले काटेर छन्। सुकेको पात र फूल हटाइनु पर्छ।
कसरी किरा र बच्न रोग सामना गर्न
सामान्यतया यो गाह्रो छैन। विशिष्ट गन्ध संग Endowed, tagetes आफूलाई Fungi र nematodes विरुद्ध सुरक्षा गर्न, हानिकारक कीरा घृणा उत्पन्न। यसबाहेक, माली भित्र हो कि अन्य बिरुवाहरु को लागि एक ढाल बन्न किनाराको को भाग लगाए। र यो rationally, marigolds, रोपण, हेरविचार, प्रजातिहरू रूपमा जो unpretentious प्रकृति हो, तर पनि बाह्य stimuli धेरै आक्रामक। कोलोराडो कीरा तिनीहरूलाई जोगिन, अन्य कीराहरू पनि छैन विशेष यस बोट को पात आनन्द उठाउँछन् गर्न चाहनुहुन्छ छ।
भोकमरी माकुरा पैसाबारे अप घाउ समयमा फूल मा भने यो छिडकाव र टीन को मद्दतले सजिलै छुटकारा प्राप्त। एकै समयमा, अत्यधिक वर्षा मोल्ड र क्षय हुनु को उपस्थिति रंग खतरामा। सुक्खा भूमि यो संघर्ष र साथ सूर्यका ठूलो रकम को ब्रश पहुँच प्रदान गर्नुहोस्। सामान्यतया यो बोट खैरो मोल्ड हडताली - यो सजिलै गाढा-खैरो स्पट द्वारा चिन्न छ। विरामीहरु द्रुत marigolds हटाउन आवश्यक छ।
तर, यो बोट त्यहाँ को 60 प्रजातिहरू छन्, सरल र समान प्रकारको लाग्न सक्छ। तिनीहरूलाई को भन्दा पार गरेर र प्रयोग समयमा हुर्किसकेका संकर छन्। सबै भन्दा लोकप्रिय प्रकार: ठाडो, ठीक leaved र marigolds अस्वीकार गर्नुभयो। विविधता को विवरण, ती सबै मा अवस्था, हेरविचार, मल प्रयोग बढ्दै सामान्यतया विशेष विशिष्ट गर्छ।
तर त्यहाँ प्रजातिहरू, अरू रुचि छैन। उदाहरणका लागि, रंग किसिम, ल्याटिन अमेरिका मा हुर्केका, कब्जियत संग मद्दत गर्छ, र यो एक उत्कृष्ट emetic र diuretic छ। को Imereti भगवा रूपमा विश्वव्यापी ज्ञात मसला, पनि यो बोट बाट गरे।
त्यहाँ gvozdikotsvetnye marigold को डबल, अर्ध-डबल, र अन्य प्रजातिहरू। सामान्यतया तिनीहरूले एक पहेंलो वा सुन्तले रंगको, तर त्यहाँ सेतो र बुरगुण्डी तन्तु संग बिरुवाहरु को प्रजातिहरू पनि छन्। कुनै पनि marigold बारहमासी रोपण र हेरविचार छ जो पनि महँगो, धेरै रंगीन सजावट उपनगरीय क्षेत्र, अपार्टमेन्ट भवन मा शहर फूल बेड र balconies छन्।
परिदृश्य डिजाइन को भाग रूपमा Tagetes
तपाईं यो बोट को बीउ रोपेर निर्णय भने केही नियम पालना सामान्य दृश्यमा थिएन पनि धोए-बाहिर वा catchy nagromozhdonnym वा आधा खाली। कम बढ्दै फूल, ती माथि उनको मध्य भर्नु, फूल बेड को किनाराको मा स्थान निर्दिष्ट गर्नुहोस्। सारा संरचना स्पष्ट देखिने छ।
एक फूल ओछ्यानमा नै रंग हुन सक्छ। तर यस्तो सेतो र रातो, खैरो र पहेँलो रूपमा विभिन्न रङ, को सबै भन्दा राम्रो संयोजन। फूल भने केही बिरुवाहरु आउनुहुनेछ वा सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो, नयाँ तन्तु तिनीहरूलाई aesthetically खुसी कवर, सारा गर्मी आँखा प्रसन्न हुनेछ।
Marigold - जीवित frieze बनाउनको लागि आदर्श सामाग्री। रंग बाहेक तपाईं थप र तरकारी बढ्न भने, बोट को बेड को किनाराको मा सुगन्धित बोट छ। यसरी तपाईं एउटा सुन्दर उपस्थिति यसलाई थप्न र फूल को peculiar गन्ध रोक्छ जो किरा देखि क्रप सुरक्षा हुनेछ।
फूल छैन केवल फूल बेड र बेड सजाउनु, तर पनि व्यापक लोक चिकित्सा र खाना पकाउने प्रयोग गरिएको। यो जडिबुटी को Tincture, चयापचय सुधार गर्ने स्नायु प्रणाली soothes र तनाव relieves। Marigold - सही cholagogue उपकरण रक्त शर्करा स्तर मा एक कमी प्रदान, मधुमेह को प्रारम्भिक चरणमा मद्दत गर्न। तपाईं अग्न्याशय, बाल हानि, गरिब दृष्टि, psoriasis समस्या छ भने, तिनीहरूले पनि अपरिहार्य छन्। हाम्रा पुर्खाहरूले यो सर्दी र फ्लू उपचार गर्न प्रयोग।
खाना पकाउने लागि, यहाँ एक मसला रूपमा अचार प्रयोग marigolds। तिनीहरूले आवश्यक तेल र रंग घटक को एक पूरी गुच्छा समावेश गर्दछ। यो सुकेको र ग्लास कन्टेनर भण्डार राम्रो पाउडर प्लान्ट milled हो र एक मसला रूपमा प्रयोग गरिन्छ। एक ताजा पात रंग सलाद लागि उपयुक्त। छोटो मा, marigold बारहमासी रोपण र हेरविचार धेरै समस्या पैदा नगर्ने, मात्र होइन परिदृश्य डिजाइन भाग, तर पनि रोग को एक नम्बर निको पार्ने साथै पकवान थप मसलादार बनाउन मदत।
को यूराल मा जाडो लागि अङ्गुर तयार: को दाखको के चिसो नाश छैन
उत्तरी क्षेत्रहरु लागि अङ्गुर छनौट
र कसरी रूखहरू गर्दा सही ट्रिम गर्न। कसरी वसन्त मा रूखहरू काट्न गर्न
Cyclamen फूल - नयाँ वर्ष बिदाको लागि एक मूल उपहार
उत्पादन "Lancome": लिपस्टिक। विवरण, समीक्षा
नीलो जूता संग नीलो पोशाक कसरी संयोजन गर्ने?
Elena Lobanova: रचनात्मक लेखक
"VKontakte" गर्न नाम कसरी परिवर्तन र सञ्चालकहरू छल्न गर्न
अङ्गुर Velez - विविधता को विवरण
हाम्रो स्वास्थ्य: उत्पादनहरु GMOs समावेश एक सूची
शब्द "प्रमाणीकरण"। यो के हो र यसको लागि के हो?
दाऊदले Schwimmer (दाऊद Schwimmer): जीवनी, Filmography र व्यक्तिगत जीवन (फोटो)
लक्षण एड्स: रोग नै प्रकट कसरी?